Beelaha Murusade iyo Habar-gidir oo dhigay gogol lagu taageerayo dowladda - Caasimada Online
Home Warar Beelaha Murusade iyo Habar-gidir oo dhigay gogol lagu taageerayo dowladda
Beelaha Murusade iyo Habar-gidir oo dhigay gogol lagu taageerayo dowladda
Muqdisho (Caasimadda Online) – Waxaa Hotel ku yaal Magaalada Muqdisho ka socdo kulan xasaasi ah oo ku dhaxeeyo beelaha Murusade iyo Habargidir.
Beesha Murusude ayaa gogol u dhigatay Beesha Habargidir, waxayna ka wada hadli doonaan qodobo xasaasi ah oo ku saabsan xaaladda Siyaasadda Soomaaliya, maadaama labadaan beel dhawaanahaan mugdi soo kala galay.
Beesha Murusade ayaa Habargidir ka codsan doonto maanta inay taageeraan Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, isla markaasna ay si fiican ula shaqeeyaan Xukuumadda.
Beesha Habargidir ayaa dhawaanahaan mucaarad ku ahaa Ra’isulwasaare Kheyre maadaama ay ka caroodeen xil ka qaadis uu ku sameeyey shaqsiyaad dhowr ah oo kasoo jeedo Beesha Habargidir, waxayna ka dhawaajiyeen inaysan la shaqeyn doonin dowladda.
Sidoo kale Kulankaan ayaa waxaa kasoo qeyb galay odayaal ka tirsan Beesha Hawiye, waxaana laga wada hadli doonaa taageeridda dowladda.
Waxaa la filayaa in shirkaas ay labada beel ku kala saxiixdaan qodobo dhowr, waana idinla wadaagi doonaan dhammaan wixii kasoo baxo Insha Allah.